China Custom aluminium Metal Fabrication kunye Welding Parts abavelisi kunye nababoneleli |THYH
Siyi-umenzi onamavaesele igxile kwiimveliso ezenziwe ngentsimbi ezilungiselelweyo iminyaka engama-20.
Singayenza ngokomzobo wakho.Nceda usithumelele umzobo wakho ukuze ufumane uqikelelo lwasimahla.
Metal Fabrication aluminiyamitanki, umzimba womatshini we-aluminium, iqonga le-aluminium.
Inkqubo: Ukusika, ukugoba, ukuwelda, ukugalela
Ingcaphephe yokwenziwa kweSikhokelo seNsimbi, Sithumelele umzobo wakho, ufumane uqikelelo lwasimahla.
Product parameters zobugcisa kunye netafile
Iimveliso Sheet Metal Fabrication, Izakhelo, izibiyeli, iZakhiwo, iZitendi, iiTafile, iiRailings, iiGrili, iiRakhi, iiNdawo ezivalekileyo, amatyala, izixhobo zesinyithi, iingcingo, itanki, iqonga njl.
Inkqubo yokuVelisa Ukusika i-Flame Cutting, i-Plasma Cutting, i-Laser Cutting (Umthamo we-1.5m * 6m, insimbi epholileyo 0.8-25mm, insimbi engenasici 0.8-20mm, i-Aluminiyam 1-15mm), ukugoba (25mm Max), i-Welding (MIG, TIG, i-Spot Welding, njl. ), Ukubethelwa ngenqindi, Ukunyathela, ukuMachining njl.njl.
IMarike ePhambili EOstreliya, eUnited States, eYurophu nakwamanye amazwe.
Ezinye iiMveliso ezenzelwe iSiko:
Umvelisi wobuchwephesha bokwenziwa kwesinyithi, amava ama-20 eminyaka, esebenza ngokugqwesa i-laser, ukusika iplasma, ukugoba, ukuwelda, isitampu kunye nomatshini.Ukunikela
iimveliso ezenziwe ngesinyithi ezenziwe ngokwezifiso,weldingisakhelo/isibiyeli/isiseko/iposti/ikhabhinethi/izixhobo/umzimba/itafile
koomatshini, iimpompo, ulwakhiwo, zaselwandle, iimoto, izithuthi kunye namashishini ahlukeneyo.
Siza kukuphendula kwiiyure ezingama-24
singenza inxalenye nonstandard ngokwemizobo yakho okanye iisampuli.
Kwaye sinikezela ngcono emva kwenkonzo yokuthengisa.
Ixabiso leemveliso zethu lifanelekile kwaye liyakhuphisana kunabanye abavelisi.
Ukulawulwa koBulunga obungqongqo ukusuka ekuveliseni ukuya kwi-delivery.Inkampani yethu yayinenkxaso yobugcisa obuqinileyo.
Siye sahlakulela iqela labaphathi abaqhelene nomgangatho wemveliso elungileyo kwingqikelelo ye-mondern yolawulo.
1. Umbuzo: Ngaba ungumzi-mveliso?
A: Singumzi mveliso.Wamkelekile ukuba undwendwele.
2. Q: Yintoni onobuchule kuyo?
A: Iodolo engekho mgangathweni (zonke iintlobo zokwenziwa kwamaphepha esinyithi nazo zonke iintlobo zomphezulutratment & steel stainless / iimveliso ze-aluminiyam kunye nomsebenzi omhle).
3. Q:Zithini izibonelelo zakho?
A: Umgangatho ophezulu owenziwe ngokwezifiso kunye nomsebenzi wesinyithi othe ngqo wemveliso, uyila, siyakha,umzobo/isampuli/umfanekiso wakho uya kuthakazelelwa kakhulu.
4. Q: Nawuphi na umzekelo okhoyo?
A: Siyavuya ukunika isampuli.
5. Q: Naziphi na iimpahla ezikhoyo?
A: Ngokuqhelekileyo senza iimpahla kuphela emva komyalelo.Uninzi lweeodolo zilungiselelwe wena.
6. Q: Kutheni ixabiso oliphawuleyo litshiphu kangaka?
A: Ulawulo lweendleko ezingqongqo, imathiriyeli ekrwada ngokuthe ngqo.Singabavelisi ngokwezikosheet metalUkwenziwa, amaxabiso ahluka kwizinto eziphathekayo, ubukhulu, unyango olungaphezulu,unikezelo kunye nokunye imiba.Ixabiso lokugqibela lixhomekeke kwiimfuno.
Qhagamshelana nathi ngoku kwikowuti kwaye ufunde ngakumbi malunga nendlela esinokugcina ngayo ixabiso lakho.Unokuhlala ulindele ingqalelo yethu ekhawulezileyo.Kwaye sijonge phambili ekusekeni ubudlelwane beshishini ixesha elide kunye nawe.Asifuni nje ukuba ngumthengisi wentsimbi yakho kodwa kunye neqabane lakho eTshayina.Wamkelekile ukuthumela imizobo kunye neesampuli kuthi ukuze unikeze.
Ngaphambili: Umgangatho oLungileyo uMvelisi we-Inductor waseTshayina i-Ikp yoMbane yenza ngokwezifiso i-DMC Coil, UL/Ce/RoHS Certified
Okulandelayo: Izahlulo zeWelding yeNsimbi yeSintu eSiko.
I-Aluminiyam yeMetal Fabrication
Cnc Sheet Metal Ukugoba
Ukwenziwa kweAluminiyam yesiko
itanki ye-aluminiyam yesiko
iindawo zokuwelda isiko aluminiyam
Amacandelo eSiko leMetal Welding
Iinkampani zeMetal Fabrication
Iphepha elichanekileyo leMetal Fabrication
Isimo sengqondo sentsebenziswano somthengisi sihle kakhulu, sidibene neengxaki ezahlukahlukeneyo, sihlala sikulungele ukusebenzisana nathi, kuthi njengoThixo wokwenene.
NguKay ovela eSydney - 2017.03.07 13:42
NguMargaret ovela eIndiya - 2018.06.12 16:22
Isiko loMsebenzi oMnzi wentsimbi...
iGophe leNsimbi eNgatyiwayo ngokweSiko...
Ulwakhiwo Lwentsimbi yesiko...